FactGem: Iwekota isi mmalite data na nkeji… No Code choro! | Martech Zone
FactGem: Iwekota isi mmalite data na nkeji… No Code choro!
Data dị na silos. Azụmaahịa na IT na-achọ echiche elekọtara ọnụ banyere data iji nyere aka weta azịza maka nsogbu ịma aka nke taa. Achọrọ akụkọ na-enye echiche dị n'otu na data agbakwunyere ka ndị mmadụ wee nwee ike ileba anya na ozi dị oke mkpa maka ụlọ ọrụ ha ma na-eme ka obi sie ike na ha nwere ike ime ma nyefee ozi ziri ezi nke dị oke mkpa maka ịga nke ọma ụlọ ọrụ ahụ.
Agbanyeghị, a na-agbasa data n'ofe sistemụ mmekọrịta, isi ihe, sistemụ faịlụ, dọkụmentị ụlọ ọrụ, mgbakwunye email, na ndị ọzọ. N'ihi na data na-adịghị ike na ulo oru ka na-achọ ịdị n'otu ọmụma, d ulo oru na-arụ “swivel-oche” integrations na-eke “ileba anya na tụnyere” akụkọ. Ha na-ajụ otu silo ma detuo nsonaazụ ndị a ka ọ dị mma, jụọ ha ọzọ ma tinyechaa data mado elu. Ha na-emeghachi usoro a ruo mgbe ha nwere ihe na-anọchite anya akụkọ ahụ ha na-achọsi ike ịmepụta. Typedị ịkọ akụkọ a dị nwayọ nwayọ, akwụkwọ ntuziaka, enweghị ntụkwasị obi, yana mperi!
Imirikiti ụlọ ọrụ na-ekwenye na enweghị ike iji ngwaọrụ na teknụzụ mepụtara data silo na azịza ya. N'ihi ya, n'ime afọ ole na ole gara aga, anyị ahụla ọnụọgụ data nke NoSQL na teknụzụ ka etinyere iji nyere aka iwekọta data ngwa ngwa na mgbatị karị. Ọ bụ ezie na ọdụ data na nyiwe ọhụrụ ndị a nwere ike belata oge na ijikọta data ma e jiri ya tụnyere usoro ọdịnala, ha niile bụ ndị nrụpụta na-ewetara ha ụdị nsogbu ndị ọzọ a ga-emerịrị ma a bịa n'ị nweta nka ndị dị mkpa iji zụlite na rụọ ọrụ na teknụzụ ndị a. Enwere ọtụtụ nsogbu dị na usoro a gụnyere mmelite njikwa mgbanwe na usoro azụmaahịa iji nwee ihe ịga nke ọma n'inye nsonaazụ.
Eziokwu na-enye ụzọ iji jikọta data na-edeghị koodu ọ bụla. Ha kwenyere na ekwesịrị inwe ụzọ dị mfe iji tinye data, ma enwere. Ha kere ya!
Ndị otu injinia na FactGem eburula ibu nke ijikwa mgbagwoju anya nke njikọta ka ndị ọrụ azụmaahịa ghara inwe. Ugbu a, mkparịta ụka maka ijikọ data ekwesighi ịmalite IT. N'ihi nke a, enwere ike iji ngwa data data nke FactGem jikọta ngwa ngwa iji wepụ data silos iji nyefee akụkọ dị n'otu na data ejikọtabeghị mbụ.
Ihe ọ na-agbadata bụ na anyị doziri nsogbu a na-agaghị ekwe omume site na ntanetị, mana ihe anyị na-enye bụ azịza azụmahịa. Onye isi oche Megan Kvamme
Mgbe ị na-etinye data, ha na-amalite site na ọtụtụ ndị na-eche na e meelarị data gị. Ndị nwere ọgụgụ isi nọ na nzukọ gị, yana ndị na-ere ahịa n'aka ndị ị zụrụ ngwa na ihe ngwọta, kere ụdị ndị a. Entlọ ọrụ na mmekọrịta ị nwere mmasị maka ma chọọ ijikọ ọnụ na-adị na data gị. Ha dị ka ndị ahịa, iwu, azụmahịa, ngwaahịa, ahịrị ngwaahịa, ndị na enye ọrụ, akụrụngwa na ndị ọzọ. Ha choro imeghe data n'ime ihe ndi a ma mee ka ha di n'otu akuko nke na-eweputa ihe omuma ahia bara uru. Na FactGem, nke a bụ ọrụ dị mfe.
Ọ bụrụ n ’ị nwere ike ịdọrọ ihe ndị ahụ na mmekọrịta maka nzukọ gị na bọọdụ, ị nwere ike iji FactGem jikọta data gị. Ọ dị mfe.
Iji jikọta data na FactGem, bido na WhiteboardR. Na ngwa a, dọrọ na dobe ndị na-eme mmekọrịta na mmekọrịta iji mepụta ụkpụrụ ezi uche dị na ya maka data jikọtara ọnụ site na "ịcha ọcha" na ihe nchọgharị ahụ. Na WhiteboardR, kọwaa ụdị njirimara ịchọrọ iso onye ọ bụla na-akpakọrịta, naanị ị ga-egosipụta ihe ịchọrọ, dịka ịchọrọ ya. Ikwesighi ịmara àgwà niile metụtara ihe ọ bụla tupu ịmalite. Ikwesighi ịmara ọkwa niile na isi mmalite ịchọrọ ijikọ ọnụ. Omume kachasị mma bụ ịmalite site na ịmepụta ihe nlereanya maka obere ole na ole ị maara nwere ike ịnye akụkọ dị n'otu - na uru ọ bara azụmaahịa gị ozugbo. Detuo ihe ndi gi, ihe ha choro, na nmekorita ha. Nwere ike ịmepụta iwu azụmaahịa iji kọwaa ihe na-eme ka ihe dị iche iche bụrụ ihe pụrụ iche na ihe kaadi nke mmekọrịta ya kwesịrị ịbụ n'ihe metụtara ụlọ ọrụ ndị ọzọ metụtara ya. Ozugbo emepụtara ụdị a, ị na-etinye ụdị ahụ ka enwere ike iji ya na MappR.
Ọ bụ ezie na WhiteboardR na-ahapụ gị ka ị jiri ngwa kọwaa ụdị azụmaahịa agbakwunyere, nke dị n'otu, nke azụmahịa, MappR na-enye gị ohere ịsepụta silos dị iche iche pụrụ iche nke data na ụdị WhiteboardR dị n'otu. Na MappR, ị nwere ike ịlele isi data wee bido mepụta eserese. Ka anyị kwuo na site na otu silo ị nwere àgwà chukwuka na ọzọ na silo, ị nwere àgwà so_ndu, na ị maara ndị a na-ezo aka na onye ahịa. Na MappR, ị nwere ike ịkọwapụta àgwà abụọ a na njirimara jikọtara ọnụ ahịa_id ị kọwaaworị na ụdị nchekwa WhiteboardR. Ozugbo ị depụtara njirimara ịchọrọ maka isi mmalite, MappR nwere ike ibubata faịlụ site na silo ahụ ma a ga-etinye ya na akpaghị aka n'ime ụdị WhiteboardR ma bụrụ nke ana - achọta ozugbo. Nwere ike ịga n'ihu na eserese isi mmalite wee banye data n'ụzọ dị otu a ruo mgbe ị mejupụtara data ịchọrọ maka otu echiche.
Iji WhiteboardR na MappR, ị nwere ike ịchekwa, ụdị, ma bupụ ụdị ị mepụtara. Modelsdị ndị a bara uru na ha ghọrọ mgbanaka decoder maka inyere azụmahịa na IT aka ịkọwa nghọta ha banyere data nzukọ, otu esi eji ya, yana otu esi eji ya n'ofe. A pụkwara iji ụdị ndị a nyere aka ịkọwa nkesa data ọhụrụ na ịmaliteghachi usoro iji nyere aka mee ka ihe ịga nke ọma ha.
Ozugbo ebujuru data, BuildR na-enye gị ohere ịmepụta ngwa ngwa dị mfe, nke nwere ike ịnweta gafee data jikọrọ ọnụ gị na ihe nchọgharị ahụ. ConnectR na-enye gị ohere idobe njikọ njikọ data weebụ maka Tableau na ngwaọrụ BI ndị ọzọ ka ị nwee ike leverage ngwaọrụ ndị a maka ịkọ akụkọ gbasara data gị dị ugbu a.
N'ihi na FactGem na-eweli mbuli nke data mwekota, yana n'ihi na naanị ị ga-eme ihe ngosi ma maapụ ihe ịchọrọ, dịka ị chọrọ ya, ntinye data na nnyefe nghọta dị oke ọsọ ọsọ. Kedu ihe nke a dị na ndụ n'ezie?
Nke a bụ Ihe Mmezi nke FactGem Data Integration Na-adị Ka:
N'oge ọkọchị gara aga, onye na-ere ahịa 500 Fortune bịarutere Factgem, na-arịọ maka enyemaka n'ihi na ha na-eji nnukwu CRM ma na-adọta data site na ebe ndị ọzọ iji gbalịa inweta nghọta. Ha Chief Data Scientist mkpa mfe ikpokọta echekwa, e-azụmahịa na ndị ahịa data nkwakọba ihe ọmụma ịghọta "isnye bụ ndị ahịa?"
FactGem kwere nkwa nnyefe na awa 24. Ha wuru ihe nlere jikọtara na ụlọ ahịa na ndị ahịa niile, gosipụtara ọhụụ ọhụrụ, ma mee ya na 6 awa, ọ bụghị 24! Ya mere . . . Ahịa # 1 na mkpọsa mụrụ. Ha esila n'otu obodo ele anya n'ime elekere isii ka ha gafee mba ahụ, gafee puku kwuru puku ụlọ ahịa, ọtụtụ iri nde ndị ahịa na terabytes nke data - ma na-eme nke a niile na ọrụ ụbọchị. Ndị ọzọ na-ere ahịa, ọrụ ego, na nrụpụta na-ebido ịhụ ma mata uru nke FactGem bara na ụlọ ọrụ ha.
Nkà na ụzụ enwewo ọganihu ruo n'ókè nke na ọ gakwaghị abụ naanị ọrụ ndị injinia. Mwepu data nke oge a esighi ike dịka ngalaba IT gị ga-achọ ka ị kwenye. CTO Clark Richey
FactGem's WhiteboardR modul na-ejikọ isi mmalite data na-ejighị koodu ọ bụla.
Gaa Leta FactGem iji mụtakwuo
Tags: Clark Richeyntinye dataeziokwumwekotamapprMegan Kvammeọcha
Ziflow: Jikwaa Akụkụ Ọ bụla nke Nyocha Ọdịnaya Gị na Usoro Nkwenye
Ọ bụ Oge Ezumike Ọzọ, Lee Usoro 10 iji jirichaa nsonaazụ gị